Nge-27 ka-Agasti ka-2020: Kwenzeka ntoni nge-27 Agasti 2020? | XperimentalHamid
Nge-27 ka-Agasti ka-2020: Kwenzeka ntoni nge-27 ka-Agasti ka-2020?
Agasti 12, 2020 Agasti 11, 2020 by Qasim Khan
Yonke imihla entsha iza nezityhilelo kwaye iphawulwe kukungazivezi kweziganeko. Kodwa ukuba ulandela iindaba kunye neendlela zosasazo lwentlalo mva nje, usuku olunye kugxilwe. Usenokuba uqaphele ukuba kukho into ekhethekileyo nge-27 ka-Agasti ka-2020.
Yintoni? Kutheni abantu bethetha ngokuboniswa kuka-Agasti 27? Yintoni imikhondo? Kuza kwenzeka ntoni? Ngubani lo uthi ngubani? Fumana iimpendulo kuyo yonke imibuzo ngokuhamba kwinqaku elipheleleyo. Eli xesha ngaphambi kobusika buka-Agasti 27 buyeza.
Kutheni le nto august 27th 2020 ibalulekile?
Nge-27 ka-Agasti u-Simpsons 'Uqikelelo
Nge-27 ka-Agasti iTikTok
Nge-27 ka-Agasti kwi-Mars Tango
Nge-27 ka-Agasti ka-2020 Ukuthetha ngeenkwenkwezi
Ukuba ujonga imikhondo njengaye nawuphi na omnye umntu malunga neziganeko ezizayo. Kwiindaba, kwindlela yemidiya yoluntu, kwaye kwincoko ngokubanzi nje usuku olunye lukhankanywa ngakumbi kunenye. Nge-27 ka-Agasti ka-2020 kwaye kujikelezwa kakhulu kwiindawo ezahlukeneyo nakumanqanaba abantu bafuna ngokwenyani ukubonakaliswa kuka-Agasti 27.
Ukuba sijonga imisebenzi yonyaka wekhalenda yonyaka wama-2020. Umhla we-27 ka-Agasti unemicimbi emibini ebalulekileyo. Olunye lusuku lweLottery kwilizwe lonke, kwaye olunye lusuku lukaZwelonke. Kodwa konke ukuncwina kunye nokuhlebeza okukhwaza kunye nokukrokra kwemini kuphakamisa ukuba kukhona okungakumbi kuyo.
Sithetha oku nje ngenxa yendlela ye-Agasti 27 TikTok? Ewe, ayisiyiyo kwaphela loo nto. Ukhe weva ngo-Agasti 27 ka-Simpsons ngokuxelwa kwangaphambili? Okanye ngaba uyazi malunga ne-Mars ye-27 ka-Mars ka-Agasti? Ukuba awuzukucacisela yonke loo nto kuwe kwaye siya kucaca ukuba kutheni olu suku lwanje luyinto yonke.
U-Simpson uye waduma ngokudumileyo ngokudumisa ngokubonisa ezinye zeziganeko eziphambili kwimbali yoluntu ngeendlela zayo ngaphambi kokuba zenzeke kwihlabathi lokwenyani.
Kuninzi kwikhredithi yayo xa kuziwa ekuxeleni kwangaphambili izinto eziza kwenzeka kwikamva. Ezinye zazo zibandakanya ukubetha ubhubhani we-corona ekufumaneni amasuntsu e-Higgs boson, kwaye uMnu. Trump ebhengeza ubongameli bakhe, emva phaya ngo-2000s.
Ngo-2016, abakwaSimps baba yintetho yedolophu xa ukuxelwa kwabo nguMnumzana uTrump njengo-Mongameli wase-United States yaseMelika babona ukukhanya kwemini yangempela. Esi sibhengezo esisondeleyo sabonakala kwisiqendu Bark ukuya kwiKamva Iikhathuni zibonakalisa uMnu. Trump elwela isihlalo sikaMongameli.
Kwimiboniso, wayethwele imo yokuseka isandla sakhe ebaxhasayo, ngelixa wehlisa isalali.
Phantse i-ditto kwi-escalator awayeza kuyisebenzisa ngonyaka ka-2016 ngexesha lephulo lonyulo. Uluhlu lweziprofetho ezibekwa phambili ngulo mboniso mde kwaye ungakhangela ukuba uphume Apha.
Ngoku, banenye ingxelo exelayo yexesha elizayo enxulumene noMongameli uTrump. Ngokuka-Simpsons ngo-Agasti 27 ukubikezela kwangaphambili ngonyaka we-2020, uMnu uTrump uza kufa ngala mhla.
Kodwa eneneni, esi siqephu sokuxela kwangaphambili sikaSimpson sibonisa ukuba kusweleke uMnumzana uTrump. Akukho siqephu simbi senziwa apho waboniswa ukuba ufile. Lo mfanekiso ujikeleziswa kwimithombo yeendaba yentlalo uqala uhonjiswe kwi-4Chen ukusukela oko waba yintsholongwane.
Enye into eqhubekayo enxulumene ne-Agasti 27 2020 ivela eTikTok. Yintoni eza kwenzeka nge-27 ka-Agasti ngumkhwa osakubetha emanqeni weqonga leendaba ezentlalo. Iqaliswe ngumsebenzisi STFU uSamantha ngokulayisha, "ulayishe ividiyo ebonisa," ukuba le nguwe, kwiphepha lakho, ukuhalalisela ukhethwe. Khumbula umhla we-27 kaAgasti, ubalulekile. ”
Ngokukhawuleza emva kokuba oku kubonakale kwiqonga elifutshane lokwabelana ngevidiyo, wonke umntu waqala ukuthetha malunga nosuku. Ukubuza ngokungxama ukuba kunjani kolu suku? Mhlawumbi lusuku lokuvalwa kweqonga e-USA, njengoko kwenzekile kwamanye amazwe amakhulu ehlabathi.
Fumana iinkcukacha zalo mkhwa kwinqaku Apha.
Nge-27 ka-Agasti inyanga kaMatshi Tango
Enye imithombo yeendaba ezithandekayo ehlekisayo ejikeleza ngomhla ichaza into malunga ne-27 ka-Agasti ka-Mars. Ngokwengxelo, ezinxulumene neNyanga kunye neMars, ezijikeleza kumaqonga eendaba ezentlalo kubandakanya i-Facebook, i-Twitter, kunye neTikTok lusuku olukhulu lwamanzi esibhakabhaka. Babanga ukuba nge-27 ka-Agasti ka-2020, imarike kunye neNyanga ziya kubonakala zilingana nesibhakabhaka.
Abantu bayaphikisana kwaye bayabelana ngenkcazo besithi, "I-Mars izakuvela ibe nkulu njengenyanga epheleleyo kwi-Sky's Sky ngalo mhla". Kwaye kwenye indawo inkcazo ithi, "I-Mars kunye nenyanga yoMhlaba ziya kuvela njengenyanga kabini nge-27 ka-Agasti ka-2020."
Mhlawumbi asiqinisekanga ngoqikelelo lwe-Simpsons Agasti 27 okanye ilifu lika-Agasti 27th TikTok. Kodwa icacile njengelanga ngosuku olungenamafu inyanga nenyanga zingahambi ngokulinganayo ngomhla wama-27 ku-Agasti.
Le yi-hoax ecacileyo kwaye abantu babelana ngokungekho mthethweni kunye nokuphawula ngokumakisha abahlobo bayile ngenxa yoko. Ke kutheni abantu beyikholelwa? Oku kungenxa yokuba usuku lubalulekile kwimbali yeenkwenkwezi zenkqubo yelanga.
Nge-27 ka-Agasti ngo-2003, uMhlaba neMars zisondele kakhulu, yayilixesha lokuqala kule minyaka ingama-60,000 idlulileyo. Okwangoku, iiplanethi ezimbini zaziziimayile ezingama-35 ezigidi ukusuka kwenye. Nangona kunjalo ngala mhla, iplanethi ebomvu yayingeykulu kwaye iqaqambile njengenyanga esiyibona ngeentsuku ezininzi. I-Mars yasondela kakhulu nge-31 kaJulayi 2018, xa umhlaba wawudlula phakathi kweMars kunye nokujikeleza kweLanga.
Ngaba unayo inkumbulo ekhethekileyo yolo suku? Lindela okufanayo nge-27 ka-Agasti ka-2020.
Nokuba zithini na iirehemu kunye noqikelelo. Siza kuyifumana iinyaniso ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe kule nyanga. Ngosuku ngalunye oludlulayo, ixesha liyasondela kwi-zero. Ke masilinde sibone.
Ngolu suku akukho namnye weplanethi oza kuba kwinqanaba elinzima lokusenza silindele into engaqhelekanga.
Nangona kunjalo, iNyanga iya kuba seCapricorn kwaye iLanga liya kuba seVirgo. Esi sithuba seNyanga licebiso lokuba sizithathele ingqalelo isimilo sethu somsebenzi. Hlala uhlelekile kwaye iyakuba yimini elungileyo.
Oku konke malunga nokubonakaliswa kuka-Agasti 27 okanye kutheni i-august 27th 2020 ibalulekile? Sishwankathele yonke imicimbi kuyo yonke iwebhu kunye nomabonwakude. Ucinga ukuba sesiphi esona siganeko sibalulekileyo semini? Ngaba ngu-Agasti wama-27 Simpsons? Okanye umsitho we-Agasti 27 ka-Mars? Kwam, kungo-Agasti we-27 kaTikTok, oyena mntu unqabileyo kwaye ongaqinisekanga.
Nokuba kwenzeka ntoni, ndithembe ukukubona ngoAgasti 27 2020. Qhubeka undwendwela.
iindidi iindaba, umphezulu tags Agasti 27 2020, Nge-27 ka-Agasti ngokuBonakaliswa, Nge-27 Agasti Simpsons, Nge-27 ka-Agasti inyanga kaMatshi, Nge-27 ka-Agasti Simpsons, Nge-27 ka-Agasti iTikTok, Simpsons Agasti 27, Kutheni i-27 ka-Agasti ka-2020 ibalulekile Post yokukhangela
Isahluko 247 - 248 seRevvel Insanity Novel
Isahluko 475 - 476 Umtshakazi wesixhenxe kaMongameli